What Brigadier Aung Sun’s mother said….and The last day of Galon U Saw | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » What Brigadier Aung Sun’s mother said….and The last day of Galon U Saw
What Brigadier Aung Sun’s mother said….and The last day of Galon U Saw
Posted by fatty on Jul 21, 2010 in History, News |3comments
for 19 july
တစ်ပြိုင်နက် သားနှစ်ယောက်ဆုံးရသူ၏ ရင်တွင်းစကား
‘ ကျုပ်သားဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဒီလို သတ္တိကြောင်တဲ့ အမှုမျိုးကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကပင် ရှုတ်ချခဲ့တဲ့ လူဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ဟာ နယ်လှည့်ရင်း ကျုပ်ထံဝင်ပြီး ကန်တော့သွားတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျုပ်က စိုးရိမ်လွန်းလို့ ‘သားရယ် လူဆိုတာ အထက်ရောက်နေရင် သူတစ်ပါးက မနာလိုလို့ မကောင်းကြံစည်တာမျိုး ခံရတတ်တယ်။ အစစအရာရာ သတိထားပါသားရယ်’ လို့ပြောမိပါတယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်သားကဗျာ – ဒါကတော့ ဘုရားတောင်မှ အတိုက်ခံရှိသေးတာပဲ။ ကိုယ်ကသာ လမ်းမှန်ကနေပြီး မှန်တဲ့အလုပ်ကို လက်ကိုင်ထားရင် ဘာမှ ကြောက်စရာ မလိုပါဘူးအမေရယ်၊ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ စစ်တိုက်နေတုန်းကတောင် မသေခဲ့သေးတာ။ ယခုတိုင်းပြည်နဲ့လူထုဟာ အရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အကောင်းအဆိုး ဝေဖန်တတ်ပါပြီလို့ အားရပါးရ ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ယခုတော့ကျုပ်သားကိုအောင်ဆန်းဟာသူအလွန်မုန်းတီးရွံရှာတဲ့လုပ်ကြံနည်းကြောင့်ကွယ်လွန်သွားရ ရှာပြီ။ ကျုပ်မှာချင်တာကတော့ သူ့ကိုလေးစားကြသလို ခေါင်းဆောင်များရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို ပြည်သူလူထုက ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့ လိုက်နာပြီး မိမိတို့လိုလားတဲ့ ခရီးကိုရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပါပဲ။ အဲဒီလိုဆောင်ရွက်လို့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် အဒေါ့်မှာခံစားရတဲ့ သားနှစ်ယောက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အပူမီးဟာ ငြိမ်းတန်သလောက်ငြိမ်းပါလိမ့်မယ်။
ဤစကားကား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အစ်ကိုဖြစ်သူ ၀န်ကြီး ဦးဘ၀င်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးများ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရစဉ်က သားနှစ်ယောက် တစ်ပြိုင်နက်ဆုံးခဲ့ရသော အမေစု၏ စကားများပင် ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ကျဆုံးသည်ဟု ကြားရသည်နှင့် အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီကလည်း ယခုလို သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို တိုက်ပြီးလျှင် – မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို အိမ်တိုင်ယာရောက် ပို့ပေးခဲ့သော အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ယခုကဲ့သို့ သွေးအေးအေးနှင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ယုံကြည်စရာပင်မရှိချေ။ ကျွန်ုပ်သည် လွန်လေပြီးသော ခေါင်းဆောင်များ၏ ဆွေမျိုးဥာတိများကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကို လည်းကောင်း ကရုဏာ သက်ပါ၏။ ယခုဖြစ်ရသည်မှာ သာမညလူသတ်မှု မဟုတ်ချေ။ ဤအမှု၏နောက်တွင် နိုင်ငံရေးလောဘဇော ရှိနေလိမ့်မည်။
ယခုအခါ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၌ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင် ဤလောဘဇော ထကြွနေသော အချက်မျိုးကို တွေ့မြင်နေရသည်။ ဤအချက်သည် မနုဿလူသားတို့၏ နောင်ရေးအတွက် အတိတ်နိမိတ်ကောင်းမဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် ဤ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ အပျက်ကိုမူတည်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် သင်ခန်းစာယူရမည်။ ဤအဖြစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာလျှင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ မဟုတ်။ အာရှ အတွက်လည်း ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်လည်း ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာဖြစ်သည်။
(သန်းဝင်းလှိုင်ပြုစုသော ဂဠုန်ဦးစော၏နောက်ဆုံးနေ့များ စာအုပ် နှာ / ၂၄-၂၆)
၁၉၄၈ ခု၊ မေလ (၈)ရက်နေ့၊ နံနက်(၅)နာရီ၊ (၃၀)မိနစ်တွင် ဦးစော၊ မောင်စိုး၊ သက်နှင်းနှင့် မှုံကြီးတို့ကို အင်းစိန်၊ ဗဟိုအကျဉ်းထောင် အတွင်းရှိ ကြိုးစင်၌ ကြိုးပေးလိုက်လေသည်။ စိန်ကြီးနှင့်ရန်ကြီးအောင်တို့ကို ရန်ကုန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင် အတွင်း၌ တစ်ချိန်တည်း ကြိုးပေးခဲ့သည်။ ကြိုးပေးမည့်နေ့က ဦးစောသည် သူ့အားသောက်ရန်ပေးထားသော နံနက်စာလက်ဖက်ရည်ကို အနီး၌ ဆွမ်းကပ်ခဲ့သည်။
ဖယောင်းတိုင်သုံးတိုင် ထွန်းညှိ၍လည်း ပူဇော်ခဲ့သည်။ ပြီးမှ အပြင်တွင်စောင့်နေကြသော အကျဉ်းဌာနမင်းကြီး ဦးဘမောင်၊ ဦးသန်းနွဲ့ (နောင်အကျဉ်းဌာနမင်းကြီး) ဆရာဝန်၊ တရားသူကြီး စသူတို့ကို ပြုံးရွှင်စွာနှုတ်ဆက်သည်။ ဦးစောသည် ရှမ်းဘောင်းဘီ မီးခိုးရောင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်ဆင်ထားသည်။ to be continue……….
ဟာ ကိုးရီးယားဇာတ်ကားလိုလို နဲက တ၀က်ကြီး
သားနှစ်ယောက်လုံးတပြိုင်းတည်းဆုံးရတဲ့ အဖွားစု ကို စာနာမိပါတယ်။
ဩော် အတ္တမာန မောဟ ကြီးလွန်းတဲ့ ငစော ပါလား…
ဒင်းမျိုးဆက်တွေ က ခုထိ ကောင်းစားတုန်း..
……….I apologize to all who read this article, I am not skillful in typing Myanmar font and I had to sit about 8 hours at inter-cafe. I am not satisfied myself too. And I specially thank to thu who helps me. Sometimesabrake is needed to take for me because of diabetes. Very soon,it will be continue.